फोटो फिचर – Tannerivoice
कर्णाली प्रदेशसभामा रहेका संसदीय समितिहरूले संसदीय खुलापन बढाउँदै गएका छन्। मिनी संसद्को रूपमा समेत चिनिने संसदीय समितिहरूले कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथा नागरिकसँग अन्तर्क्रिया गर्नका लागि गाउँघरमै गएर नागरिकहरूसँग संवाद गरिरहेका छन्। प्रदेशसभाका समितिहरू विभिन्न समयमा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा स्थानीय गाउँघरमै पुगेर नागरिकहरूको गुनासो सुन्ने गरेका छन् भन
सूचना टाँसेर स्थगित भयो कर्णाली प्रदेशसभा बैठक, भोलि (बुधवार) २ बजे पुनः बैठक बोलाइयो
सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनको मंगलबारको बैठक स्थगित् भएको छ। सोमबार बोलाइएको पहिलो बैठकमा प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएका कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापालाई मन्त्री पदबाट हटाउनुपर्ने माग राख्दै अवरोधका गरेको थियो । प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले मंगलबार दिउँसो २ वजे बैठक बोलाएका थिए । तर
सुर्खेत समाज दक्षिण कोरियाद्धारा विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न वितरण
सुर्खेत । सुर्खेतबाट बैदेशिक रोजगारीको लागि कोरियामा रहेका युवाहरुले कोरोना महामारीका कारण खाद्यान्नको जोहो गर्न समस्यामा रहेका समुदायहरुलाई सहयोग गरेका छन् । विदेशी भुमिमा श्रम गरी कमाएको आम्दानी बाट केहि रकम छुट्याएर उनिहरुले सामाजिक कार्यमा सहयोग गर्दै आइरहेका छन । सुर्खेत समाज दक्षिण कोरिया द्वारा विपन्न समुदायहरुलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको छ । विहिबार वीरेन्द
भारी वर्षामा टहरा र त्रिपालमुनि सुरक्षामा तैनाथ सशस्त्र प्रहरी (फोटोफिचर)
झापा । बंगालको खाडीमा आएको चक्रवात (तुफान) को प्रभाव देशभर परेको छ। बिहीबारदेखि प्रदेश १ सहित देशका विभिन्न स्थानमा हावाहुरीसँगै भारी वर्षासँगै हावाहुरी चलेको छ। एकातिर कोरोना र अर्कातिर भारी वर्षाका कारण झापासहित देशभरका जनजीवन झन् प्रभावित बनेको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले निषेधाज्ञा लगाएकोले आम नागरिकलाई भारी वर्षाले खासै प्रभाव पारेन, उनीहरू घरभित्रै सुर
जंगलका राजा राउटेलाई दैनिकी चलाउनै मुस्किल
सुर्खेत । कर्णालीका विभिन्न जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटे समुदायका नागरिकहरुलाई दैनिकी चलाउन मुस्किल भएको छ। सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका–११ आपसोती जनैघाटस्थित भेरी नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका राउटे समुदायलाई निषेधाज्ञाका कारण खाद्यान्नको जोहाे गर्न समस्या परेको हो। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै सुर्खेतमा पूर्णरुपमा एक महिनादेखि निषेधाज्ञा जारी हुँदा राउटे समुद
रक्सी खानेलाई मात्र मासु!
हुम्ला डायरी-३ पिप्लाङमा मन यसै स्थिर थिएन। शरीर थिलोथिलो भएको थियो। मौसम सुख्खा। उराठलाग्दो। हामी बस्ने होटल गाउँपालिकाको कार्यालयको आडैमा थियो। गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखा पनि त्यही घरमा थियो। पिप्लाङको पारिपट्टी खार खोलाबाट बिजुली निकालिएको थियो। बिजुली भएकाले धेरै कुराको सुविस्ता थियो। बेलुका खाना खानुअघि साहुजीले पशु शाखाको फ्रिजमा राखेको चिसो बियरको बोतल देखाउँदै सोधे–सरहरूलाई चल्छ?
ट्रयाक्टरको छतमा बसेर हुम्लाको बाटो
हुम्ला डायरी-२ पढ्नुस्ः भाग १- मनले बाम गाउँभन्दा अगाडि पाइला चाल्नै मानेन एक रूपैयाँको नोट अचेल त्यति देखिँदैन। त्यसमा राखिएको चित्र चंखेली लेकको हो। त्यो तस्बिर सायद बाम आसपासबाट खिचिएको हुँदो हो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह शिकार खेल्न चंखेली पुगेका थिए रे। त्यसै समय घनघोर हिउँ परेछ। उनले कठिनाइ भोग्नुपरेछ। स्मरण रहोस् भनेर नोटमा तस्बिर राख्न लगाए रे। हामी बामको शिरानमा रहेको नाफा बजारमा
मनले बाम गाउँभन्दा अगाडि पाइला चाल्नै मानेन
हुम्ला डायरी पहिल्यै थाहा थियो– हिमाली जिल्लाको यात्रा कठिन हुन्छ। तर पनि यसपटक हुम्ला जान्छु नै भनेर अड्डी कसेँ। हुन त आफूले चाहेर मात्रै पनि कतिपय यात्रा पूरा हुँदैनन्। जति जोडिन्छन्, सबैको स्वार्थ मिल्नुपर्छ यात्रामा। जीवन पनि त एक यात्रा हो। हुम्ला–कर्णालीकै विकट भूगोल। सडक सञ्जाल नजोडिँदै यात्रा गर्ने रहर पूरा हुँदै थियो। सडक पुगेपछि गाडीमा सरर जान कुनै दिन अवसर जुरिहाल्ला नि जस्तो लाग